Fantaro ireo mpanoratra - (page 2) - Instant Malagasy
Par Parfait Partout le 13 Janvier 2014 à 16:29
Tafahaona eto ny tia sy ny manina. Mpanoratra hafa indray ity tonga eto amin'ny Instant Malagasy ity, tsy izany fa i Haja Randriamahazonoro.
teraka ny 6 jolay 1970, tsy "poeta" fa "mpanora-tsoratra",
Tia manandratra ny hasin'ny tenin-drazana, ary entanin'ilay aingampanahy tsy voafetra, tsy mila fotoana, tsy mifidy loha-hevitra, fa izay tononkalo tianao soratany dia eo noho eo dia vita, tsy mila vakiraoka.
Iisan'ny fialamboly ny manoratra hainteny, sombin-tantara, oham-pitenenana ary koa tononkalo
Raha te hitafatafa sy hidinidinika amin'i Haja Randriamahazonoro àry ianao dia ity ny pejy facebook-ny Haja R.
Par Parfait Partout le 17 Décembre 2013 à 13:30
I RafHon, Malagasy, Mpanoratra
Ny mombamomba azy?
RafHon kamban-teny avy amin'ny anarany hoe RAFALIMARO Honoré, tonga teto amin'ny tontolon'ny velona ny volana febroary 1983 teto Iarivo.
Malagasy fiaviana ary Malagasy fomba fiaina sy fisaina ihany koa.
Nandalina manokana ny fitondratena sy fihetsiky ny olombelona teny amin'ny Anjerimanontolo.
Misehatra eo amin'ny fiarovana ny ankizy ary indrindra ny fanarenana ireo latsaka an-katerena. Mitarika fikarohana eo amin'ny tontolon'ny herisetra mihatra amin'ny ankizy.
Ny vinany dia mifototra amin'ny fanajana ny maha olona na inona fiaviany na inona fari-piainany.
Ny kanto dia habaka nalain'ny fanahiny ho namana tsy foy sy hizarany ny nofiny. Olombelona miaina ny eritreriny sy ny vinany ary manaja ny hafa tanteraka!
Raha te hitafatafa amin'i RafHon àry ianao dia ity ny adiresy facebook-ny RafHon
Par Parfait Partout le 5 Décembre 2013 à 15:43
Mpanoratra Ngezalahy raha i Fredy Jaofera. Tsy hidera vady mahay mandihy hoy ny fitenenana fa eo ny sandriny hilaza azy.
Taratasy fanoloran-tena natolotr'i Fredy Jaofera hapetraka eto amin'ny Instant Malgache ny volana desambra 2013 (tsindrio ny sary raha toa ka misy tsy hita)
Aingam-panahy Feon'ny Saina
Par Parfait Partout le 26 Novembre 2013 à 13:09
Resy lahatra ianao fa kanto ny asa soratr'i Aingam-panahy Feon'ny Saina?
Fantaro àry hoe iza moa izany andriambavilanitra manan-talenta izany.
Raharimalala Rodalson Jenny alias Aingam-panahy monina any Tsiroanomandidy; 28 taona , manambady ary manan-janaka iray.
Ny fitiavany ny zava-kanto vita amin'ny teny? Hoy izy hoe: "Tia sy mandala ny haisoratra ary maniry ny mba hivelatra bebe kokoa amin'izany talenta izany ! "
Raha te hitafatafa amin'i Aingam-panahy ary ianao dia ity ny adiresy facebook-ny: Aingam-panahy Feon'ny Saina
Par Parfait Partout le 13 Novembre 2013 à 11:55
Zeze Razafimanana no anarana nosafidiko amin'ny maha-mpanoratra ahy, fa ny tena anarako dia, ANDRIATSIZAKAINA Maichel Franzzel. Zeze no fiantsoana ahy, izay avy amin'ny anarako hoe: Franzzel,ary ny hoe Razafimanana dia anaran'i Dadabenay.
Mpanoratra i hany koa io Raibeko io saingy tsy dia fantatr'olona loatra. Tao Fianarantsoa aho no teraka ny 12 septambra 1980. Comptable no asako, ny kajy no fivelomako fa tsy manakana ahy tsy hanoratra sy hizara izay voasoratro izany asako izany.
Raha te hifandray amiko ianao dia Zeze Razafimanana no adiresiko ao amin'ny facebook ary zezerazafimanana@yahoo.fr kosa ny adirey Mailaka.
Ankafiziko ny manoratra tononkalo no sady efa lovako ihany koa izany!!
Taratasy fanoloran-tena nosoratan'i Zeze Razafimanana
Instant Malagasy - Créer un site pro gratuit sur Eklablog - CGU - Signaler un abus -